मोटोपना र दम लाग्नै नदिन लागेपनि केही दिनमै चैट बनाउन यो खानुहोस् ! पूरा पढ्नुस - Social Video Khabar
मोटोपना र दम लाग्नै नदिन लागेपनि केही दिनमै चैट बनाउन यो खानुहोस् ! पूरा पढ्नुस
हाम्रो वरपर हामीसँग धेरैं रोगहरुको सरल उपचार हुन्छ तर हामी त्यसका बारेमा ख्याल गर्दैनौं । जुन बेला हाम्रो समाजमा अस्पताल थिएनन त्यो बेला पनि मान्छेहरु बिरामी हुन्थे र जडिबुटीको सहयोगमा निको हुन्थे आज हामी त्यसैं मध्यको मह र कागतिको कुरा गर्दैछौं । जाडो होस या गर्मी मह र कागती सधै खाने गर्नाले हामी स्वस्थ्य रहन्छौ ।
कोहि अनुहारको छाला राम्रो बनाउन कागती ,पानी र मह पिउँछन् भने कोहि तौल घटाउन कागती मह र पानी पिउँछन् ।
खाली पेटमा कागती,मह पानीः
आधा कागतीको रस र १ चिया चम्चा मह हल्का तातो पानीमा मिलाउनुस र त्यसलाई तत्कालै पिउँनुस । यो पानी खाएको १ घण्टामा चिया या कफी पिँउनुस् । उक्त मिश्रण तपाई मुख नधोई अर्थात ब्रश नगरी पनि पिउँन सक्नु हुन्छ। नियमित कागती पानी पिँउने गर्दा तपाई स्वस्थ्य र निरोगी हुनुहुन्छ।
पाचन पक्रियामा सुधार ल्याउन :
लिम्फेटिक सिस्टमको सफाईमा सहयोगीः लिम्फेटिक सिस्टममा पानी र आवश्यक तरल पदार्थको कमी भएमा थकान महसुस हुन्छ । कब्जियत, सुत्न समस्या, उच्च या न्युन रक्तचाप, तनाव र मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्छ । बिहान–बिहान यो मिश्रण पिउनाले लिम्फेटिक सिस्टम सुख्खा हुन मद्दत गर्छ, जसबाट प्रतिरक्षा प्रणालीमा पनि सुधार हुन्छ ।
अनुहारमा निखार आँउछः
कागती यतिकै पनि छालाको लागि राम्रो मानिन्छ। तर मह र तातो पानीमा मिसाएपछि यसले हाम्रो छालालाई प्यूरीफाई गर्ने काम गर्दछ। कागती एंटी(ब्याकटेरियल भएकोले यसले मुखमा भएको दाग हटाउँदछ र अनुहारमा चमक आँउदछ।
संक्रमण हटाउने क्षमता हुन्छः
महमा शक्तिशाली एन्टीब्याक्टेरियल गुण हुन्छ । यसमा कैयौ प्रकारको संक्रमण हटाउने क्षमता हुन्छ । कागती, तातो पानी र महको मिश्रणले एक उत्कृष्ट मूत्र (शरीरबाट पानी बाहिरनिकाल्ने तत्व) को रुपमा काम गर्छ । मूत्रमार्गलाई सफा गर्ने यो सबैभन्दा राम्रो तरिका हो । युटिआई या मूत्रमार्ग संक्रमणबाट पीडित महिलाका लागि यो मिश्रण वरदान साबित हुन्छ ।
इनर्जी लेबल बढाउँछः
तौल घटाउन उपयोगीः
पोषक तत्व र भिटामिनले भरपूरः
रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबूत हुन्छः
नोट: माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो। यी बिषयवस्तुहरु केवल जानकारीको लागी मात्र यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धि टिप्सहरु प्रयोग गर्नु भन्दा पहिला अनिवार्य रुपमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोला ।
तपाइहरुको १ शेयरले हामीलाई अगाडी बढ्न मद्दत पुग्दछ । त्यसैले कन्जुसाइ नगरीकन शेयर गरिदिनुहोला ।
source: tajasamchar. com
Prevबाग्लुङ कालिका भगवतीको दर्शन गर्दै कात्तिक २२ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस्
Nextआजको राशिफल / वि.सं. २०७६ कार्तिक २३ गते शनिबार
कुवेतमा लिभिङ टुगेदरमा रहेकी नेपाली बंगलादेशी नागरिकसँग बस्दै आएकी महिलाको मृत्यु
बाथ रोग कसलाई र कुन अवस्थामा लाग्छ ? यी कुरा ख्याल नगरे आपांग बनाउँछ : डा. दिपा शाह
मुक्तिनाथको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोला, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौ !